iOS 16 ichaunza mamwe maficha ekuvanzika nekuwedzera iCloud Private Relay | Nhau dze iPhone
Ngirozi Gonzalez | 30/04/2022 13:00 | iOS 16
iOS 16 Iri mukati mekusvika kwese kuburitswa uye makuhwa mumavhiki apfuura. Pane zvishoma nezvishoma kusvika WWDC22 yasvika uye tinoona nhau dzese dzemashandisirwo matsva eapuro hombe. Pachiitiko ichi, mishumo ichangoburwa inoratidza izvozvo iCloud Yakavanzika ataure (kana iCloud Private Relay muchiSpanish) ichawedzera mabasa ayo mukati meiOS 16 kuunza yakavandudzwa kuvanzika kwevashandisi kune yese yekushandisa system. Zvingangoita kuti basa racho risave mu "beta" modhi sezvazvave muIOS 15 kugadzira nzira yeiyo vhezheni yechokwadi ine nhau dzakakosha muIOS 16.
iCloud Private Relay ichawedzera maitiro ayo muIOS 16
Iko kushanda kwakakosha kweCloud Private Relay kwakavakirwa pa kubatana kwedu kunobhura kubva kumaseva maviri akasiyana. Nekubounce uku, izvo zvinotarisirwa kuvanza iyo IP uye DNS marekodhi atinobatanidzwa nawo kune ekunze mawebhusaiti. Parizvino, iOS 15 ine iyi sisitimu mu beta kuburikidza neiyo iCloud + kunyorera inosanganisirwa muCloud zvirongwa. Zvakadaro, iCloud Private Relay inoshanda chete neSafari.
Maererano neshumo rakabudiswa ne digiday, Apple inogona kunge iri kufunga nezvazvo wedzera iCloud Private Relay kune ese iOS 16 kubatana. Ndokunge, ese maInternet ekubatanidza anosiya iDevice yedu anozovharirwa kuburikidza ne rebound kubva kuICloud relay: yechitatu-bato mapurogiramu, yechitatu-bato masevhisi, mabhurawuza kunze kweSafari, nezvimwe. Izvi zvingareva shanduko yakakosha sezvo mazhinji emakambani ekutevera achiwana mari kuburikidza neruzivo rwune chekuita neIPs yedu uye mamwe marudzi emukati aanogona kutora kubva pakubatana.
Nekudaro, iri nhanho yakakosha yekuvandudza kuvanzika kwevashandisi Mumambure. Uye zvakare, mashoma mashoma maficha anotarisirwa kusvika mune inonzi iCloud Private Relay bundle kupfuura yekubatanidza. Ngatiyeukei kuti mukati meiyi bundle mune zvakare sarudzo yeku 'Viga tsamba' iyo Apple inogadzira maemail asina kujairika anoendesa kune yedu huru email, pakati pemamwe mabasa. Izvi zvinotora nhanho kumberi muIOS 16 nekushandura chengetedzo yemushandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 16 » iOS 16 ichaunza mamwe maficha ekuvanzika nekuwedzera iCloud Private Relay
Apple chete inowana nhamba dzakanaka mukutengesa kwe smartphone kusvika zvino gore rino